nlekota igwe ojii - Motadata
Nyochaa arụmọrụ, yana nnweta akụrụngwa igwe ojii
Nweta nleba anya nke oge n'ime ntinye igwe ojii gị. Jiri ngwa nleba anya igwe ojii na-akwado AI n'ọ̀tụ̀tụ̀ nyochaa akụrụngwa igwe ojii gị site na iji visibiliti ihe omume, ndekọ na metrik zuru oke.
Jiri nhụta igwe ojii nweta AI ops
Nweta ngwa nleba anya igwe ojii nke ọkwa ụlọ ọrụ iji nyochaa mmemme, ndekọ na metrik sitere na ngwa ọha, nkeonwe ma ọ bụ ọtụtụ igwe ojii ozugbo.
Ihuru igwe ojii
Nyochaa akụrụngwa igwe ojii, mbugharị, na ndekọ iji mekọrịta ahụike na arụmọrụ nke igwe teknụzụ igwe ojii gị niile.
Belata oghere ọhụhụ site n'ịkwado data sitere na gburugburu dị iche iche iji nweta nghọta iji mara ihe omume na-achọ nlebara anya.
Wepụ mkpọtụ site n'ịchịkọta ọkwa dị mkpa ma mee ka usoro mmezi ahụ dịkwuo ngwa.
Nyochaa ọtụtụ ọrụ igwe ojii. Ma ọhaneze, nzuzo, ma ọ bụ ngwakọ
Nyochaa sava, ngwa, arụmọrụ, nnweta ọrụ na metrik ndị ọzọ dị mkpa.
Nyochaa akụrụngwa niile, nchekwa data, ngwa n'ime dashboard jikọtara ọnụ maka nchọpụta ihe kpatara mgbọrọgwụ ngwa ngwa.
Nyochaa, dozie nsogbu, ma kwalite akụrụngwa akwadoro na ọrụ igwe ojii na-ewu ewu dị ka AWS na Azure (ọrụ akwadoro gụnyere EC2, RDS, S3, Lambda, wdg. Maka AWS na Azure VM, Azure SQL Database, Azure VM, wdg Maka Azure).
Chọpụta ma kewapụ mgbọrọgwụ na-ebute ngwa ngwa site na njikọ smart
Nweta dashboard dị iche iche ngwa wee banye n'ime nghọta teknụzụ maka nchọpụta ihe na-akpata mgbọrọgwụ ọkụ ọkụ.
Mekọrịta mmemme na ihe adịghị mma. Belata mkpirisi aka ike wee chọpụta ngwa ngwa nsogbu na-emetụta ọrụ.
Wepụta data ndekọ site na iji parser dị ike na ịdọrọ & dobe nkwado na-enweghị mkpa maka asụsụ ajụjụ mgbagwoju anya.
Belata MTTR n'ụzọ ziri ezi. Jiri ọkwa ọgụgụ isi dozie nsogbu
Ọhụụ ozugbo maka imekọrịta ihe metụtara arụmọrụ n'ofe nchịkọta ngwa maka nchọpụta nsogbu ngwa ngwa
Weghara data nchọpụta oge na-akpaghị aka na ọbụna ihe mere
Chọpụta ihe adịghị mma nwere oke arụmọrụ dị egwu. Chọpụta ha n'oge site na ihe kpatara ya wee wepụta nsogbu na obere mmetụta ọrụ
Nweta Visibiliti gafee gburugburu ebe obibi gaa Kpebie ihe omume
Nlele nke igwe ojii
Nweta nleba anya igwe ojii site na nkwado nke AWS CloudWatch, AWS CloudTrail, na Azure Monitor.
Wepụ oghere nhụsianya
Nyochaa mpaghara mkpuchi buru ibu gụnyere OS na metrik ngwa-ọkwa gụnyere igwe ojii akọwapụtara.
Nyocha ndekọ akpaaka
Nweta nkọwa zuru oke na arụmọrụ akụrụngwa IT yana nghọta gbasara ihe omume
Nweta ọkwa nnweta ọrụ yana latency gafee akụrụngwa igwe ojii tupu ọ emetụta ahụmịhe onye ọrụ njedebe.
Real oge nlekota
Nleba anya n'ofe ọtụtụ usoro ọrụ, usoro data, nsogbu na mmezi ha.
Kwado akpaaka maka akpaaka ndụ okirikiri CI yana nhazi maka ịrụ ọrụ kacha mma.
Nwere ike 05, 2020
Gịnị bụ Cloud Monitoring? Atụmatụ, Uru &...
Kedu ihe kpatara nyochaa igwe ojii na akụrụngwa akụrụngwa n'ime ụlọ...
Gịnị bụ Cloud Monitoring? Kedu ka ọ si arụ ọrụ & P kacha mma ...
Nlekota igwe ojii: Ihe ị kwesiri ịma